Warqad ka timid Kooxda Maamulka ee
MTP-MPO Multi-Mayraxda Solutions
MTP-MPO Cable Baarlamaanka
MTP-MPO isku xira
Wareejinta Fiidiyaha Dijital ah
Fiilooyinka Optic Active
Fiber Optic dadban Kooban
Fibre optic opticator
Fiber optic xadhig balastar
Cable Management iyo lifaaqan
Tester iyo Tools
INTCERA ayaa Brand cusub oo Fiberconcepts 'tan sano ka hor. Fiberconcepts waa soo saare keentay caalamiga ah iyo alaab-of premium fiber optic dadban qaybaha takhasusay shabakadaha si buuxda u muhiim ah. Qaybaha Our iyo xalalka laga heli karaa codsiyada in ganacsiga, dawladda iyo kuwa kale oo caalamka oo dhan. Fiberconcepts, waxaa la aasaasay sanadkii 2002 oo xaruuntiisu tahay Shenzhen, Shiinaha.
Fiberconcepts ayaa loo isticmaalaa khibrad farsamo xoog leh si ay u abuuraan faylalka saarka INTCERA ah. Ilaa hadda, Fiberconcetps waxa uu noqday mid ka mid ah ilaha firfircoon caalamiga ah ee ka kooban wali indhaha dadban.
Sheekada Our guul waa mid fudud: baahida macaamiisha kulmaan la soo saarka oo tayo leh ka samatabbixiyey on time, mar kasta oo qiimo cadaalad ah adeeg heer caalami ah. Sababo la daarna tayada wax soo saarka iyo waxqabadka, waxaan ku adkayn iskaashi muddo dheer faa'iidada macaamiisha our dunida oo dhan
Sida caddayn dadaalkeeda, waxaan bixinaa tiro balaadhan oo ah adeegyada, oo ay ku jirto taageero codsiga, tababar wax soo saarka, taageero farsamo iyo kaalmada loo xirxiro.
waxyaabaha Fiberoncepts xirmaan ganacsiyada, dawladda iyo kuwa kale oo leh xal jaray waxqabadka sare u gaar ah oo ay taageerayaan adeegyada heegan ah iyo tababar. alaabta iyo Our Ammaanadooda saldhig macaamiisha caalamka Fiberoncepts 'muddo ka badan 10 sano waxa aanu qorshaynay iyo macmalay wax soo saarka kasta oo ay u bixiyaan sida ugu ballanqaaday; mar kasta oo si degdeg ah ficil leh dabacsanaan iyo hufnaan. Macaamiisha doorashada Fiberoncepts u hesho in ay shaqada ula koox xirfadlayaal heegan ku faraxsan yihiin inay caawiyaan tallaabo kasta oo ku habka our. Our cilmiga iyo aqoonta uu kaa caawin doonaa sidii aad ku heli xal wali aad u baahan tahay.
Fiberconcetps waxaa ka go'an in uu bixiyo adeeg maqleen macaamiisha iyo taageero, bixinta si degdeg ah oo saldhig aqoonta wax soo saarka oolna ah in ka badan 10 sano oo khibrad ah.
Haddii aad tahay macaamiisha ah ee hadda jira, waxaad ku soo maray our dhalmada degdeg ah, aqoon wax soo saarka, tayada, iyo heerka sare ee adeegga. Haddii aad tahay qof macmiil ah oo cusub, nala soo xiriir fadlan, la aad ka raali noqon, iyada oo aannu tayada iyo adeegga.
Sidaas daraaddeed, caddayn dadaalkeeda, innagu waynu karaynaa inaynu ka dhigi INTCERA uu noqdo brand caan ah ugu dhakhsaha badan.
Xiriiriyaha caanka ah
MTP SM MM OM4 Patchcords , Kala-bixinta , MTP Patchcords , MTP Cable Patch cord , MTP 12F 24F 36F 48F 96F Patchcords , MTP Si LC Cassettes ,